Duodenitis ( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Duodenitis ( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း)
Duodenitis ( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
Duodenitis ( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း)ဆိုတာဘာလဲ။
Duodenitis ဟာ အူသိမ်ရဲ့ အစက duodenum ရောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ duodenum နံရံ ရောင်ခြင်းဟာ ဗိုက်နာခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်းနဲ့ အခြား အူလမ်းကြောင်း လက္ခဏာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းတော့ H pylori ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အစာအိမ် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါပိုးဟာ ပုံမှန်အတိုင်း duonenum နံရံကို အစာအိမ် အက်ဆစ်တွေကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ အကျိအချွဲအလွှာကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအလွှာမရှိတော့ခြင်းဟာ နာတာရှည် ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ duodenum အနာဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Duodenitis( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း) ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေက လူတွေရဲ့ ၈၀% ဟာ Helicobacter Pylori ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း ရှိနေကြပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Duodenitis( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း) ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Duodenitis ဟာ အစာအိမ်နံရံရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့ လက္ခဏာ အတော်များများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေဟာ လူတွေကြားမှာ ပြင်းထန်မှု ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
Duodenitis လက္ခဏာတွေကို နေ့စဉ် (သို့) တခါတရံ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေမှာတော့ ဒီလက္ခဏာတွေဟာ ဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။
· အန်ခြင်း၊ အန်ခြင်းမရှိပဲ ပျို့ခြင်း
ပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အချို့အခြေအနေတွေမှာ Duodenitis အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ လက္ခဏာတွေရှိရင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
ဘာတွေက Duodenitis( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း) ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
Duodenitis ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ H.pylori ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အစာအိမ်နဲ့ အူသိမ်ထဲ ဝင်ရောက်လာပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အခြားအကြောင်းရင်းတွေကတော့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ ဖြစ်တဲ့ aspirin, ibuprofen, naproxen တွေကို ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
• Crohn’s disease (အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ရောင်ခြင်း)
• Bile reflux (သည်းခြေရည်များ duodenum မှ အစာအိမ်အတွင်း ဝင်ခြင်း)
• အချို့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်း — ဥပမာ herpes simplex virus နဲ့ ကိုယ်ခံအားနည်းခြင်း
• အူသိမ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်း
• အသက်ရှူစက်နဲ့ အသက်ရှူခြင်း
• အဓိက ခွဲစိတ်မှု၊ ပြင်းထန်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါဒဏ်ရာရရှိမှုတွေနဲ့ ရှောခ့်ရခြင်း
• အဆိပ်ပါတဲ့ အရာတွေကို စားမိခြင်း
• ကင်ဆာရောဂါအတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသခြင်း
ဘယ်အရာတွေက Duodenitis( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Duodenitis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အချက်ရှိသူ အကုန်လုံးကတော့ duodenitis ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု များစေတဲ့ အချက်တွေကတော့
စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ ပြင်းထန်သော နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း
Duodenitis( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း) ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
သင့်ဆရာဝန်က Duodenitis ကို သိရှိနိုင်မယ့် စစ်ဆေးမှုများစွာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ H.pylori ကို သွေး၊ ဝမ်း၊ အသက်ရှူ စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ Breath test အတွက်ကတော့ သင်ဟာ ကြည်လင်ပြီးအရသာမဲ့တဲ့ အရည်တစ်မျိုးကို သောက်ရမှာဖြစ်ပြီး အိပ်ထဲကို အသက်ရှူထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ တကယ်လို့ သင့်မှာ ရောဂါပိုးရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်က carbondioxide gas အပိုကို တွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်က အသားစယူခြင်းနဲ့ အူလမ်းကြောင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်စဉ်မှာ ကင်မရာ အသေးလေးတပ်ထားတဲ့ မှန်ပြောင်းကို လည်ချောင်းမှတစ်ဆင့် အစာအိမ်၊ အူသိမ်အတွင်း ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရောင်ရမ်းမှုတွေကို တွေ့နိုင်စေပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်က ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သေချာမတွေ့ရှိရင် အသားစယူပြီး တစ်ရှူးစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Duodenitis ( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း)ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
Duodenitis ကုသခြင်းဟာ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူထံမှ ကျန်းမာရေးကုသမှု ရယူခြင်းကနေ စတင်ပါတယ်။ Duodenitis ရှိမရှိ သိရှိဖို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူက ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ စစ်ဆေးရန် သွေး၊ ဝမ်းနဲ့ ဆီး samples တွေကို တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ အူအပေါ်ပိုင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းဟာ duodenum ကို သေချာမြင်ရစေပြီး သေးငယ်တဲ့ အသားစယူခြင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါတယ်။ အသားစယူပြီး မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ကာ H.pylori infection ရှိမရှိ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်အနာဖြစ်ခြင်းအတွက် ပိုးသတ်ဆေးသောက်ခြင်း – ပိုးသတ်ဆေးကို ဆေးပတ်လည်အောင်သောက်ခြင်းဟာ ရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကတော့ ပိုးသတ်ဆေးနှစ်မျိုးကို ၁၄ ရက်ကြာပေးတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ
Duodenitis ကို ကုသတဲ့ အခြားဆေးများ – proton pump inhibitors, histamine H2 receptor antagonists တွေဟာ အစာအိမ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အက်ဆစ်ဓါတ်ကျဆင်းစေတာကြောင့် Duodenitis အတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ ကုသမှု ဖြစ်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Duodenitis ( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း)ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Duodenitis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
စပ်သောအစာ၊ အက်ဆစ်ဓါတ်ပါသော အရည်များ (လိမ္မော်ရည်၊ နာနတ်သီးရည်) လျှော့ခြင်း၊ အူကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ဆေးတွေ လျှော့ခြင်း
Duodenitis. http://www.healthline.com/health/gastritis-duodenitis#Treatments6. Accessed2Mar 2017.
Duodenitis. https://en.wikipedia.org/wiki/Duodenitis. Accessed2Mar 2017.
Duodenitis. https://radiopaedia.org/articles/duodenitis. Accessed2Mar 2017.